SarcoidosisUK Team - Chairman, Trustees, Office
THE SARCOIDOSISUK တွင် TEAM
အောက်က SarcoidosisUK အဖွဲ့တွေ့ဆုံမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတစ်ဦးချက်တင်ရှိသည်ဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည် - ပြုပါကျေးဇူးပြုပြီး ထိတွေ့ရ.
ဟင်နရီ SHELFORD, B.Sc (Hons;) MSc MBA ဘွဲ့ရ FRGS
ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ
ဟင်နရီကုသမှုရှည်လျားသောကာလပြီးနောက်လွှတ်ယခုဖြစ်ပါသည်, 2002 ခုနှစ်တွင်အဆုတ် Sarcoidosis ရောဂါနှင့်ခံခဲ့ရသည်။ သူဟာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လူသူအစဉ်အဆက်ကတည်းက Sarcoidosis ဗြိတိန်များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းထားပြီးတူညီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်များကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုကံကောင်းတန်ဖိုးထား။ 2003 ခုနှစ်တွင်သူသည်အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်က Sarcoidosis သုတေသနရန်ပုံငွေ, £ 60,000 မှနှစ်ဆခဲ့သော£ 30000, ကြီးပြင်း။ သူကတစ်ဦးဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည့်အဘို့ - သူကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်ညစာစားပွဲကိုင်ပြီးအားဖြင့်ပိုက်ဆံထမြောက်တော်မူ။ သူနေဆဲရရှိထားသူတစ်ဦးကစံချိန်! ဟင်နရီသူထောက်ခံမှု, သတင်းအချက်အလက်, အသိအမြင်နှင့်သုတေသနအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ထားပြီး 2014 ခုနှစ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ အားလုံး SarcoidosisUK ရဲ့ Trustees နှင့်ဝသကဲ့သို့ဟင်နရီဆိုလုပ်ခမရှိဘဲမိမိဆန္ဒအလျောက်အခြေခံပေါ်မှာသူ့အချိန်ပေးပါသည်။
ဟင်နရီ says: "Sarcoidosis အဘို့အဘယ်သူမျှမကုသမှုရှိပါသည် - လက္ခဏာများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီပေးဖို့မူးယစ်ဆေးတစ်ခုတည်းကိုသာသေးငယ်တဲ့စာရင်းထဲမှာ။ အခြို့သောအဘို့ရောဂါထွက်လောင်ကျွမ်း။ ငါကနည်းနည်းရေရှည်ပျက်စီးမှုနှင့်ငါ့ကိုစွန့်ခွာထွက်မီးရှို့ရာကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူတွေထိုသို့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရွက်။ ဆဲတခြားသူတွေကိုထုတ်ရှို့ပါဘူး။ နာတာရှည်အခွအေနေအဖြစ်က ပို. ပို. irreparable ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု wreaks နောက်ဆုံးမှာဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်ငါ SarcoidosisUK နှင့်အတူလုပ်အားပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေစဉ်းစားမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါလိမ့်မယ်အရာ - ကျနော်တို့အကျယ်စျေးကြီးအပြာရောင်ကောင်းကင်ပြာသုတေသနလုပ်ဖို့မကံကောင်းပါပဲ။ Sarcoidosis ရှားပါးအောက်မှာ-သုတေသနပြုရောဂါဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းဝင်သုတေသန၏မရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ကို Sarcoidosis ကုသပေးဖို့, သင်ယူမှုနှင့်အခြားရောဂါကုသ၏ backlog အသုံးချခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စတွင်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းစွာမေးမြန်းပါရန်ရှိသည် "ကိုလျှောက်ထားသလား" ။ ဒါဟာအများကြီးစျေးသက်သာပေမယ့်နေဆဲစျေးကြီး, မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ပါပဲ။ ဒါဟာနေဆဲဆရာဝန်များ, သုတေသနပညာရှင်များ, ပစ္စည်းကိရိယာ, ဆေးခန်းများနှင့် Labs ကလိုအပ်သည်။
သုတေသနကျနော်တို့ကော်မရှင်၏အသီးအသီးအပိုင်းအစတဦးတည်းခြေလှမ်းနီးကပ်လာတဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီမှာကျေးဇူးပြုပြီး get ကူညီရန် အကြှနျုပျတို့အားလှူဒါန်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ တိုင်းတစ်ခုတည်းလှူဒါန်းမှုကိစ္စရပ်များ။ အတူတူကျွန်တော်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ "
ယောဟနျသ CORDNER, BSc FCCA
ယောဟနျသသူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအကောင့်အသစ်များ၏တာဝန်ခံ၌တည်ရှိ၏ 2015 ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် SarcoidoisUK ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ယောဟန်သည် 2007 ခုနှစ်တွင်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့နောက်ဆုံးဒီနောက်ပိုင်းမှာစနစ်တကျ sarcoidosis အဖြစ် reclassified ခဲ့သည် 2012 ခုနှစ် cutaneous sarcoidosis နှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။ သူ၏အခွအေနအေနာတာရှည်သော်လည်းအများအားဖြင့်ဆေးနှင့်အတူတည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ အများအပြားခံစားနေရသူလိုပဲသူပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝဒေနာနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့။
ယောဟန်သည်လိဒ်တက္ကသိုလ်မှနှင့်စာရင်းကိုင်အဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားတက္ကသိုလ်ထွက်ခွာအပေါ်သင်္ချာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူက 20 နှစျကျြော Chartered ဘဏ်ဟာလက်မှတ်ရစာရင်းကိုင်များအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ 25 နှစျကျြောသူကစီးတီးရှိဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုသူသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်အလေ့အကျင့်ပြေး
ရှင်ပေါလု SINCLARE, ICSA MCIM MBA ဘွဲ့ရ
ရှင်ပေါလု 1997 ခုနှစ်တွင် SarcoidosisUK ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူအတိတ်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်မေတ္တာရဲ့တိုးတက်မှု၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် 2011 ခုနှစ်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုကနဦးသူကုသမှုနှင့်ဆေးရုံများနှင့်အတူတစ်ဦး variable ကိုအတှေ့အကွုံခဲ့ပေမယ့်ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ငြိမ်ခဲ့ပြီနှင့်သူ၏မူးယစ်ဆေးစစ်အစိုးရကောင်းစွာတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ် 1988 ခုနှစ်တွင်အဆုတ် Sarcoidosis ကန်ထရိုက်။
ရှင်ပေါလုကပထမဦးစွာစားဖိုမှူးအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီလေ့လာပြန်သွားကြ၏။ သူကပိုမကြာသေးမီကချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်နှင့်အဓိကအားအလုပ်လုပ်ကိုင်, ဘဏ္ဍာရေး၏ဧရိယာ၌သူ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘဝများစွာသုံးစွဲခဲ့သည်။ ယခုသူသည် Semi-အငြိမ်းစားဖြစ်ပါတယ်။
Susan Wilson, BCom FCCA
ဆူးမကြာသေးမီကချသူမ၏အပြည့်အဝအချိန်အခန်းကဏ္ဍကနေအရှိန်မြှခဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားရှာဖွေစူးစမ်းခံစားသည်။ 20 နှစျကျြောသူမငွေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်, ဗြိတိန်အနှံ့လည်ပတ်နေတဲ့အကြံပေးကုမ္ပဏီတခုမှာဘဏ္ဍာရေး function ကိုတက်ခေါင်းနှစ်လုံး။ သူမ၏မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။
Richard isacommunications professional within HM Government and hasastrong passion for content creation, in particular filmmaking. Former official videographer to Theresa May during her time as prime minister, Richard proudly uses his marketing and communications expertise to help widen the awareness of the charity and its work. Richard lost his father to sarcoidosis in 2004.
Emil GADIMALIYEV, MBBS MBA ဘွဲ့ရ
Emil Gadimaliyev related ဘာမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်စိတ်အားထက်သန်သူသည်ဆေးဝါး / ဇီဝနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကအမျိုးမျိုးသော NHS ကိုး စား. အတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦး, Emil Sarcoidosis နှင့်အတူမိသားစုဝင်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူ sarcoidosis များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းများအတွက် SarcoidosisUK ရဲ့ရှာဖွေရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခွင့်ထူးခံစားရ၏။
Leo CASIMO, BA (Hons)
Leo joined SarcoidosisUK in March 2020. He was initially responsible for Marketing and Fundraising but now is responsible for the day-to-day charity operations. He lives in east London and loves to play the piano in his spare time.
Charlene PINK, BSc (Hons)
Charlene joined SarcoidosisUK in September 2020. She is responsible for overseeing the marketing and fundraising efforts for the charity. She lives in east London and loves to watch nature documentaries in her spare time.
jo သူမကအမြဲစပိုင်းတွင်တစ်ခရိုင်သူနာပြုအသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ရပ်ရွာ setting ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အထွေထွေအလေ့အကျင့်သို့လျင်မြန်စွာသို့ပြောင်းရွှေ့ထားပြီး 2004 ခုနှစ်တစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီ။ သူမကအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းရေရှည်အခြေအနေများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖုံးလွှမ်းပေမယ့်သူမသည်လတ်တလောတွင်, အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါများအတွက်အတိုးနဲ့အထူးကုအလေ့အကျင့်သူနာပြုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ jo Sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၏ 18 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး 2016 အတွက်တိုင်ကြားမှုကို set up ကူညီပေးခဲ့ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။
ဂျဲနီ Glasgow တှငျနထေိုငျနှင့် 2006 အတွက်သူနာပြုအဖြစ်သူမသည်အမြဲရေရှည်အခြေအနေများအတွက်စိတ်ဝင်စားရှိခဲ့ပါတယ်နဲ့ MS, ပါကင်ဆန်နှင့် lymphoedema နှင့်အတူလူအဖြစ်တချို့ကတခြားရှားပါးအခြေအနေများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးအရည်အချင်းပြည့်။ သူမလည်းအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးမှစွဲလမ်းနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဂျဲနီကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ကြားမှု၏နံပါတ်ထံမှအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ သူမသည် 2017 အတွက် SarcoidosisUK အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ငါရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုအလယ်အလတ်နှင့်လူနာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုကူညီကျွန်မတို့ရဲ့စကော့တလန်အုပ်စုများစုစည်း 2015 ခုနှစ် SarcoidosisUK ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဦးနှောက်, အရေပြား, မျက်စိ, အဆုတ်, အရိုးဆစ်နှင့်အသည်းကိုထိခိုက်စေ, ငါ၏အသက်တာ၏ sarcoid အများဆုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့ရောဂါမဖြစ်မီငါဘဏ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ပေမယ့်နေမကောင်းကျန်းမာရေးမှတဆင့်စောစောအနားယူခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအံ့သြဖွယ်ခင်ပွန်းနဲ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကကောင်းစက်ဝိုင်းနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများကို, မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူထိတွေ့ရပေးပါ။
SarcoidosisUK မအရာအားလုံးကို sarcoidosis ၏အသိအမြင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်ပုံကိုကြည့်ရှုပါ။
sarcoidosis သို့ SarcoidosisUK ရန်ပုံငွေကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သုတေသနပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အခြေအနေကိုများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။